ဆုံးပါးသွားသလို ဟန်ဆောင်ပြီး ဆွေမျိုး ၊ မိတ်ဆွေ ဆီကနေပိုက်ဆံလိမ်တောင်းခဲ့လို့ အဆုံးသတ်မလှခဲ့တဲ့ အမျိုးသားရဲ့အဖြစ် - Mckzone Daily
ဆုံးပါး ၊ ကွယ်လွန် တဲ့ကိစ္စဟာ အမှန်တကယ်တော့ စနှောက်လိမ်ညာသင့်တဲ့ ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေဆီကပေါ့ ။ သို့ပေမဲ့လည်း အချို့သောသူတွေက ပိုက်ဆံရဖို့ကိုသာမြင်ပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ လိမ်လည်တတ်ကြပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံက Tachwit J အမည်ရှိတဲ့ အမျိုးသားဟာ သူ၏မိတ်ဆွေ ၊ ဆွေမျိုးတွေဆီကနေ နာရေးကူညီတဲ့ ငွေကြေးတွေရချင်လို့ဆိုပြီး လိမ်ညာကာ ဆုံးပါးသွားသလို ဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါ အဖြစ်အပျက်ဟာ Tachawit J ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာ Tachawit J ၏ နှာခေါင်းထဲမှာ ဝါဂွမ်းတွေနဲ့ အပိတ်လိုက်ဖြင့် လဲလှောင်သေဆုံးနေတဲ့ ဓာတ်ပုံကို Facebook ပေါ်မှာ ကြေညာခဲ့ရင်ကနေ အစပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
ထို့နောက် ဓာတ်ပုံကိုမြင်တော့ မိဘတွေ ၊ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေက အံ့သြထိတ်လန့်သွားကြပြီး မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် သေဆုံးသွားရတာလည်း ဆိုပြီးမေးမြန်းခဲ့ချိန်မှာတော့ ဇနီးဖြစ်သူက ကင်ဆာရောဂါအချိန်အတော်ကြာခံစားရပြီးမှ သေဆုံးသွားခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ် ။ ထို့အပြင် သူမဟာ Tachawit J ရဲ့မိခင်ကို ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီး အသုဘစရိတ်အတွက် ငွေပို့လာပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် ။ သားဖြစ်သူ သေဆုံးသွားခဲ့လို့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေကြတဲ့ မိသားစုတွေက အခေါင်းဝယ်ဖို့ နဲ့ ဇာတိမြေကိုပြန်လာဖို့ ငွေကြေးများပေးပို့ခဲ့ပါတယ် ။ ထို့အပြင် နောက်တစ်ရက်မှာတော့ သားဖြစ်သူရဲ့အလောင်း ရောက်လာမှာဆိုပြီးတော့ မိသားစုဝင်တွေက အသုဘပွဲကို ဝမ်းနည်းပူဆွေးစွာနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ် ။
နောက်တစ်ရက်မှာတော့ အလောင်းက ရောက်မလာတဲ့အပြင် ၊ Tachawit J ရဲ့ ဇနီးလည်း မရောက်လာလို့ ဝမ်းကွဲအစ်မတစ်ဦးက ဖုန်းဆက်ကြည့်ချိန်မှာတော့ Tachawit J ကိုယ်တိုင် ဖုန်ဖြေကြားခဲ့ပြီးနောက် မကြာခင်မှာပဲ ဖုန်းပြန်ချသွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ပါတော့တယ် ။ Tachawit တို့ဇနီးမောင်နှံလိမ်ညာခဲ့မှန် မိသားစုဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတွေအကုန်သိရှိခဲ့ချိန်မှာတော့ မိခင်ဖြစ်သူက ” သားဖြစ်သူက. ဘယ်လို လိမ်ညာခဲ့ပါစေ သူမအပြစ်မမြင်ကြောင်း သို့ပေမဲ့ ၎င်းတို့လင်မယားကိုတော့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ” သတင်းမီဒီယာ သမားများကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ် ။ ထို့အပြင် Tachawit ရဲ့သူငယ်ချင်တွေကလည်း ” မင်းတော်တော် ယုတ်မာတယ်.. မင်းနဲ့ ကျောင်းအတူတက်ခဲ့ရတာကိုတောင် နောင်တရမိတယ်..ငါတို့မှာတော့ နာကျင်ခံစားလိုက်ရတာ..မင်းနဲ့ နောက်ထပ်မတွေ့ချင်တော့ဘူး..ဒီရဲ့ အမျက်ဒေါသတွေက မင်းအတွက်ပဲ…Go to hell ” ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ် ။ အဆိုပါ Tachawit ရဲ့ အသုဘဓာတ်ပုံကိုတော့ ယခုချိန်ထိ ဖျက်ပစ်ခဲ့ခြင်းမျိုးမရှိသေးတဲ့အပြင် ၎င်းတို့စုံတွဲမှာလည်း လိမ်ညာခဲ့မှုအတွက် အတော်လေးနောင်တရမိကြောင်း ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ် ။
ဆုံးပါး ၊ ကှယျလှနျ တဲ့ကိစ်စဟာ အမှနျတကယျတော့ စနှောကျလိမျညာသငျ့တဲ့ ကိစ်စမြိုးမဟုတျပါဘူး ။ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျ့ကိုခဈြမွတျနိုးကွတဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးတှဆေီကပေါ့ ။ သို့ပမေဲ့လညျး အခြို့သောသူတှကေ ပိုကျဆံရဖို့ကိုသာမွငျပွီး နညျးမြိုးစုံနဲ့ လိမျလညျတတျကွပါတယျ ။ ဒီတဈခေါကျမှာလညျး ထိုငျးနိုငျငံက Tachwit J အမညျရှိတဲ့ အမြိုးသားဟာ သူ၏မိတျဆှေ ၊ ဆှမြေိုးတှဆေီကနေ နာရေးကူညီတဲ့ ငှကွေေးတှရေခငျြလို့ဆိုပွီး လိမျညာကာ ဆုံးပါးသှားသလို ဟနျဆောငျခဲ့ပါတယျ ။ အဆိုပါ အဖွဈအပကျြဟာ Tachawit J ရဲ့ဇနီးဖွဈသူဟာ Tachawit J ၏ နှာခေါငျးထဲမှာ ဝါဂှမျးတှနေဲ့ အပိတျလိုကျဖွငျ့ လဲလှောငျသဆေုံးနတေဲ့ ဓာတျပုံကို Facebook ပျေါမှာ ကွညောခဲ့ရငျကနေ အစပွုခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။
ထို့နောကျ ဓာတျပုံကိုမွငျတော့ မိဘတှေ ၊ ဆှမြေိုးမိတျဆှတှေကေ အံ့သွထိတျလနျ့သှားကွပွီး မညျသညျ့အကွောငျးကွောငျ့ သဆေုံးသှားရတာလညျး ဆိုပွီးမေးမွနျးခဲ့ခြိနျမှာတော့ ဇနီးဖွဈသူက ကငျဆာရောဂါအခြိနျအတျောကွာခံစားရပွီးမှ သဆေုံးသှားခဲ့ရတာဖွဈကွောငျးဖွကွေားခဲ့ပါတယျ ။ ထို့အပွငျ သူမဟာ Tachawit J ရဲ့မိခငျကို ခကျြခငျြးဆကျသှယျပွီး အသုဘစရိတျအတှကျ ငှပေို့လာပေးဖို့တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ ။ သားဖွဈသူ သဆေုံးသှားခဲ့လို့ ကွကှေဲဝမျးနညျးနကွေတဲ့ မိသားစုတှကေ အခေါငျးဝယျဖို့ နဲ့ ဇာတိမွကေိုပွနျလာဖို့ ငှကွေေးမြားပေးပို့ခဲ့ပါတယျ ။ ထို့အပွငျ နောကျတဈရကျမှာတော့ သားဖွဈသူရဲ့အလောငျး ရောကျလာမှာဆိုပွီးတော့ မိသားစုဝငျတှကေ အသုဘပှဲကို ဝမျးနညျးပူဆှေးစှာနဲ့ပွငျဆငျခဲ့ကွပါတယျ ။
နောကျတဈရကျမှာတော့ အလောငျးက ရောကျမလာတဲ့အပွငျ ၊ Tachawit J ရဲ့ ဇနီးလညျး မရောကျလာလို့ ဝမျးကှဲအဈမတဈဦးက ဖုနျးဆကျကွညျ့ခြိနျမှာတော့ Tachawit J ကိုယျတိုငျ ဖုနျဖွကွေားခဲ့ပွီးနောကျ မကွာခငျမှာပဲ ဖုနျးပွနျခသြှားခဲ့တဲ့ အဖွဈမြိုးနဲ့ ကွုံတှခေဲ့ပါတော့တယျ ။ Tachawit တို့ဇနီးမောငျနှံလိမျညာခဲ့မှနျ မိသားစုဆှမြေိုးအသိုငျးအဝိုငျးတှအေကုနျသိရှိခဲ့ခြိနျမှာတော့ မိခငျဖွဈသူက ” သားဖွဈသူက. ဘယျလို လိမျညာခဲ့ပါစေ သူမအပွဈမမွငျကွောငျး သို့ပမေဲ့ ၎င်းငျးတို့လငျမယားကိုတော့ အဆကျအသှယျဖွတျလိုကျပွီဖွဈကွောငျး ” သတငျးမီဒီယာ သမားမြားကိုဖွကွေားခဲ့ပါတယျ ။
လူအများအားကျရလောက်အောင် ကျောင်းသားကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ဆရာမ
လိင်ဆက်ဆံဖို့ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ချစ်သူရဲ့မျက်နှာ မမှတ်မိနိုင်တော့လောက်အောင် ထိုးကြိတ်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်
မျက်မမြင်ခွေးလေးအတွက် အကောင်းဆုံးလမ်းပြလေးဖြစ်နေပေးတဲ့ ခွေးပေါက်စလေး